Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Zvakaoma kusarudza chete 5 Easy Day trip From Milan By Train kuti mugove nemi. Mari yefashoni yeItari inopenya nesarudzo dzekushanyira vashanyi. Kwete chete ari izvozvo akazara fashoni, asi ane incredible kare, akitekicha, and beautiful scenery…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Italy ndiyo imwe yenyika dzakakurumbira muEurope yekushanyira nekuda kwenzvimbo dzakasiyana siyana mukati memiganhu yayo. Northern Italy iri Premier hotspot kana totaura Italian tsika, nezvakawanda kuti vafambi kuona uye kuita. Kunyangwe kuteedzera waini yakanaka…